Izy io dia vita amin'ny akora polihin'ny nylon miaraka amin'ny fampisehoana tanteraka. Izy io dia manana tombony tsara amin'ny fangaraharana, ny tanjaka avo, ny fahamarinan-drano tsara, ny fanoherana ny korosi ary ny fananganana mora, ny fametrahana ny haben'ny refesi-linear, ny fanamafisana elektrika tsara sy ny fanoherana ny fahanterana, ny tsy misy poizina ary tsy misy fofona.
Ny kiran'ny MH nylon dia manana fepetra voafaritra tsara miaraka amin'ny kalitao azo antoka sy haingana ary azo atao mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa. (toy ny kalitao, loko, lanja, fonosana, sns.) hifanaraka amin'ny filan'ny tsena samihafa
fonosana: Fonosana amin'ny plastika, cone, fantsona na skein, amin'ny 2g-5000g
Noho ny heriny avo ， avo gloss ， avo extensibility, ny kofehy ny nylon ny MH dia ankafizin'ireo mpanaingo lamaody, dia mivelatra be dia be izy io amin'ny fanoratana kofehy, voaly ， kiraro fanatanjahan-tena, fitafiana nentim-paharazana, harona arabika.
Izy io koa no kofehy jono fahita indrindra, amin'ny ampahany lehibe 0.1mm-0.6mm. Afaka misafidy ny hateviny sy ny tanjaka mifanaraka amin'ny rano sy ny fitaovam-panjonoana ny mpanjono.
Voahangy vita amin'ny kofehy vita amin'ny landihazo